The Ab Presents Nepal » धन कमाउन विदेश पुगेका ४० भन्दा धेरै नेपाली चेली अलपत्र!
धन कमाउन विदेश पुगेका ४० भन्दा धेरै नेपाली चेली अलपत्र!
ती महिलासँग सम्पर्कमा रहेका चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो सीआरआइ नेपाली सेवा बेइजिङमा कार्यरत पत्रकार चेतनाथ आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
चेतनाथजी, गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा ४४ जना दुःख पाएर बसेको खबरहरू आए। अहिले चीनमा नेपाली महिलाहरू काम गर्न जाने सङ्ख्या बढेको हो?चीनमा काम गर्न आउने नेपाली महिलाको सङ्ख्या बढेको होइन। यसभन्दा अगाडि यसरी खासै आएका पनि थिएनन्।
नयाँ ‘केस’ हो। चीनको ल्याओनिङ प्रान्तको एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीले नेपालको म्यानपावर कम्पनीसँग सम्झौता गरेर र नेपालको श्रम विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर पठाएको रहेछ।चीनमा अरू देशबाट पनि विदेशी कामदार ल्याउने गरिएको छ?
आएका छन्। जस्तो म आफैँ पनि चीनमा ‘वर्किङ भिसा’मा काम गरिरहेको छु। यहाँ काम गर्न आउन पहिलो कुरा त स्नातक पास गरेको हुनुपर्छ। र उसको कामको क्षमता के हो त्यो काम कुन ठाउँमा आवश्यक छ भन्ने कुरा पुष्टि हुनुपर्छ।
चीन सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्रै कामकाज गर्ने ‘जेड’ भिसा प्राप्त हुन्छ। दोस्रो कुरा जुन ठाउँमा अहिले ४४ जना नेपाली महिला अलपत्र छन् त्यो ठाउँ भनेको उत्तर कोरियाको सीमा नजिकै पर्छ र त्यस क्षेत्रमा केही उत्तर कोरियाली नागरिकहरू काम गर्छन्।
सीमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई एक प्रकारको समझदारीमा पाँच छ महिना काम गर्छन्। फेरि आउँछन्, त्यो हिसाबले त्यो ल्याओनिङ प्रान्तमा उत्तर कोरियाका नागरिकलाई त्यो सुविधा प्राप्त भएको हुन सक्छ। तर नेपालीलाई छैन।त्यसो भए नेपालीहरूले अवैध रूपमा काम गरिरहेका हुन् त ?सबै कुराको बदमाशी नेपालको म्यानपावर एजेन्सीले गरेको छ।तर उनीहरूले श्रम मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर आएका होइनन र?
हुनत हो। तर जे का लागि जसरी ल्याइनुपर्थ्यो त्यसो गरिएको छैन।गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा सिलाउने काम गर्न आउनुपर्ने तर अहिले आएका महिला कोही पनि सिलाउन जान्ने मान्छे होइन ।कोही पढ्दै नपढेको मान्छे र कोही प्लस टुसम्म पास गरेको मान्छे छन् भने एकदुईजना विदेशमा पहिले काम गरेर फर्केको। सिलाइको मेसिन छुँदै नछोएको मान्छेहरू म्यानपावर एजेन्सीले पठायो।काम नजानेको भएर दुःख पाए भन्नुभएको?
ती ल्याओनिङ प्रान्तमा बसिरहेका छन्। दुःखको कुरा उनीहरूलाई काममा नगएपछि खान दिइँदैन।
तपाईँसँग उनीहरू कसरी सम्पर्कमा आए?चीनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् त्यहाँ नेपालीहरू काममा आएका छन् भन्ने थाहा पाएँ। त्यसपछि ‘वीच्याट’ ठेगाना लिएर कुराकानी गरेँ। उनीहरूले भिडिओ कल गरेर बस्ने ठाउँ देखाए। उनीहरूको अवस्था सबै मलाई सुनाए।
अहिले पनि उनीहरू त्यही गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा छन् उसो भए? गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीको कम्पाउण्डभित्र बस्ने ठाउँ दिएको छ। एउटा कोठामा चारवटा खाट छ जसमा आठजना बस्छन्।उनीहरू भन्छन् हामी काम गर्न जान्दैनौँ हामी नेपाल फर्किन्छौँ।
त्यहाँ बिहे गरेर जाने नेपाली महिलाले दुःख पाएको समाचार पनि तपाईले प्रेषित गर्नुभएको थियो। अनि चिनियाँ डान्स रेष्टुराँहरूमा पनि नेपाली युवतीहरू पुर्याइएका छन् भन्छन् नि?डान्स रेष्टुराँको कुरा केरुङको हो। अरुतिर चीनमा कहिँपनि त्यस्तो छैन।
पहिला तातोपानीको कुरा पनि थियो।पहिले तातोपानी सीमा खुला हुँदात्यो कुरा आएको थियो। तातोपानी नाका बन्द भएपछि डान्स रेष्टुराँको कुरा पनि बन्द भयो।
बिहे गरेर आएकामध्ये मैले दुई दर्जन जति भेटेको छु। आठ नौजना नेपाल फर्किसके। बाँकी जो मैले भेटेको छु उनीहरूको राम्रो छ। उनीहरू आफ्ना श्रीमान् र बच्चासँग नेपाल आउजाउ पनि गर्छन्।नेपालबाट विभिन्न देशमा काम गर्न चाहने महिलाहरू देश छोड्ने क्रम बढ्दो छ। भारत खाडी र अब चीन। चीन जान चाहने महिलाहरूको व्यवस्थापन कसरी गरे ठीक होला?